Barkimo xariirta |Shirkadda Wonderful Manufacture And Trade Company Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
Farqiga u dhexeeya 19 mm, 22 mm, 25 mm barkin xariirta
Boqolkiiba xariirtii injijkii labajibbaaran ee a 22 mm barkin xariir ahku dhawaad ​​20% ayuu ka sarreeyaa kan xariirta 19mm.Miisaanka hooyada oo sarreeya waxa kale oo ay tusinaysaa in tolnimadu ka sii cufan tahay, iyo tibaaxan cufan waxay caawisaa inay ilaaliso dhalaalka iyo dhalaalkabarkin xariirta bulberry.Tani waxay siinaysaa boos adkeysi xoogan.
Cimriga a barkin xariir oo saafi ahMiisaanka 22 mm waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay labanlaab ka xaashida xariirta leh ee miisaanka hooyada hoose.In kasta oo ay ka dhumuc weyn tahay 19 mm xariirta, 22 mm xariirta waxay u jilicsan tahay sida 19 mm, waxayna leedahay muuqaal dhalaalaya.
Xariiro saafi ah oo miisaankeedu yahay 19 mm waa isku dhaf weyn oo adkeysi, casriyeyn, iyo raaxo.Waa kuwo la awoodi karo, waxaana loo sameeyay isticmaalka maalinlaha ah, waxayna u adkeysan karaan dhaqidda caadiga ah.Haddii si habboon loo daryeelo, dhalaalka, isticmaalka, iyo dhalaalka xariirta 19mm waxay socon doontaa muddo wanaagsan.Sida xariirta 22mm, xariirta 19mm waa mid aan tol lahayn oo siman.
Boqolkiiba xariirtii injijkii labajibbaaran ee xariirta 25 mm ayaa 30% ka badan kan 19 mm xariirta.Daryeelka habboon iyo dhaqidda saxda ah, xaashida xariirta ee 25 mm waxay socon kartaa ilaa 10 sano.Xariirta 25 mm waxay caan ku tahay raaxo iyo xarrago.Xariirta 25mm waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo ay ka mid yihiin gogosha arooska, dabaaldegyada ka qaybgalka, iyo hadiyadaha sannad-guurada.
Baaxadda Barkimada xariirta
Maxay 6A uga dhigan tahay 100% Dhar Xariir ah oo Mulberry ah?
Intaa waxaa dheer, xariirta leh Fasalka 6A waxay ku kacaysaa qiimo ka badan tayadooda tayadooda marka loo eego kuwa fasalka 5A.Taas macnaheedu waa in a6Barkimo xariir ahXariir laga sameeyay fasalka 6aad Xariirtu waxay ku kacaysaa qiimo ka badan sababtoo ah xariirta tayada wanaagsan ee la isticmaalobarkin xariir ahlaga sameeyay Xariirta Fasalka 5A.
Sida Loo Hagaajiyo Barkimo Xariir Madow Oo Fashilmay
Halkan waxaa ah tillaabo degdeg ah oo fudud oo aad qaadi karto si aad u soo celiso dhalaalkaagii libdhay100% barkimo bulberry ah.
Ku shub ¼ koob oo khal cad ah gudaha baaquli biyo diirran.
Isku dar si fiican u walaaq oo ku dhex geli barkinta gudaha xalka.
Barkimada ku dhaaf biyaha ilaa ay si fiican u qooyeen.
Ka saar barkinta oo si fiican u biyo raaci.Waa inaad hubisaa inaad si fiican u biyo raacin ilaa dhammaan khalka iyo urta ay ka baxayaan.
Si tartiib ah u tuuji oo ku faafi jillaab ama layn aan soo gaadhin iftiinka qorraxda.Sida aan hore u soo sheegay, iftiinka qorraxdu wuxuu soo dadajiyaa midabka dharka.
Maxaad samayn lahayd ka hor inta aanad iibsan barkin xariir ah?
Ka hor inta aan la helin abarkimo dhar xariir ah, weydii soo-saarahaaga inuu ku siiyo warbixinta tijaabada midabaynta dharka xariirta.Waxaan hubaa inaadan rabin dharka xariirta ah ee midabka beddela ka dib markaad dhaqdo laba ama saddex jeer.
Iibsad ahaan, hadday tahay macmiil toos ah ama tafaariiqle/jumlad-iibiye, waa lama huraan inaad ogtahay sida dharka xariirta ah ee aad iibsanayso ay uga fal-celiso dhaqidda, feereeynta, iyo iftiinka qorraxda.Intaa waxaa dheer, midabka midabku wuxuu muujinayaa heerka caabbinta dharka ee dhididka.
Laakin haddii aan warbixinta tijaabada la heli karin, waxaad adigu samayn kartaa xoogaa baaritaanno ah.Codso qayb ka mid ah dharka aad ka soo iibsanayso soo saaraha oo ku maydh biyo koloriin leh iyo biyaha badda.Ka dib, ku cadaadi birta dharka lagu dhaqdo oo kulul.Dhammaan kuwan ayaa ku siin doona fikrad ah sida ay u waartobarkin walxo xariir ahwaa
Walxaha xariirta ah ee bulberry barkimowaa raagayaan, si kastaba ha ahaatee, waa in si taxadar leh loo maareeyaa.Haddii mid ka mid ah dharkaaga uu dhoco, waxaad mar kale ka dhigi kartaa mid cusub adigoo raacaya mid ka mid ah hababka aan soo sheegnay.
Jawaab celin Wanaagsan
Kaliya noo soo dir astaantaada, summadaada, naqshadeynta xirmada, waxaan sameyn doonnaa jeesjees si aad u hesho muuqaal muuqaal ah si aad u sameyso mid qummanbarkin xariir oo saafi ah,ama fikrad aan dhiirigelin karno
Kiis barkin xariir ah oo la habeeyey iyo cadad ka hooseysa 1000 xabbo, wakhtiga hogaanka waa 25 maalmood gudahood tan iyo markii la dalbay.